Manchester United oo kooxda Manchester City ku garaacday saxiixa Harry Maguire… (Goorma ayuu tijaabad caafimaad mari doonaa?) – Gool FM
Manchester United oo kooxda Manchester City ku garaacday saxiixa Harry Maguire… (Goorma ayuu tijaabad caafimaad mari doonaa?)
(Manchester) 14 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo sheegayaa inay dariskeeda Manchester City ku garaacday saxiixa xiddiga ay wada doonayeen ee Harry Maguire, kaddib markii ay iibka difaacan kala heshiisay naadiga Leicester City.
Manchester United ayaa heshiis rikoorka Adduunka ah oo dhan 80 milyan oo gini la gaartay naadiga Leicester City si ay uga soo qaadato Harry Maguire, labada kooxood ayaana haatan ka heshiiyey saxiixiisa sida uu baahiyey Wargeyska The Sun.
Warbixinta uu daabacay Wargeysku waxaa lagu sheegay in xiddiga xulka qaranka England uu berri oo Isniin ah u soo duuli doono Magaalada Manchester si uu tijaabada caafimaad ugu maro kooxda Man United.
Man Utd oo ka arrimisa garoonka Old Traffrod ayaa bixin doonta 60 milyan oo gini oo kaash ah iyo 20 milyan oo gini oo ku xiraan doonta shuruudo, waxaana lacagtaa ay ku soo qaadanaysaa difaacan 26-sano jirka ah.
Taasi waxa ay ka dhigaysaa Harry Maguire difaaca ugu qaalisan adduunka, waxaana uu jabin doonaa rikoorkii Virgil van Dijk oo ay kooxda Liverpool ku soo iibsatay 75 milyan oo gini bishii Janaayo ee sanadkii 2018-kii.
Kooxda dawacooyinka lagu naanayso ee Leicester City ayaa difaacan ku soo iibsatay 17 milyan oo gini sanadkii 2017-kii, waxaana ay ka sameeyeen lacag faa’iido kaash ah oo gaaraysa 43 milyan oo gini oo ay u sii dheertay 20 milyan oo gini oo loo yaryareyn doono taasoo shuruudo ku xirnaan doonta.
Philippe Coutinho oo iska diiday Man United, Alabaabadana u furay inuu ku biiro koox kale oo ka dheesha horyaalka Premier League